UNSOM Waxay soo bandhigeysaa shaqo ka bannaan: Kaaliyaha Luuqadda ee Goobta - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
TAARIIKHDA KAMA DAMBEYSTA AH: 24 JULY 2018
TAARIIKHDA SOO SAARISTA: 25 JUNE 2018
MAGACA JEGADA: KAALIYAHA LUUQADDA EE GOOBTA
QAYBTA: GUDDIGA ARRIMAHA SIYAASADDA IYO DHEXDHEXAADINTA
MUDDADA HESHIISKA: HAL (1) SANO OO GO’AN
LAMBARKA OGEYSIISKA BOOSKA BANNAAN: UNSOM/PAMG/030/2018/SM
Warbixin Gaar ah:
Booskan waxaa la maalgelinayaa muddo hal sano oo hordhac ah kaliya, muddo kordhintana waxaa ay ku xirnaan doontaa sida loo ansixiyo miisaaniyadda. Booskan waa mid maxalli ah. Shakhsiga booskan codsanaya ayaa mas’uul ka ah dhammaan kharashka ka bixi doono si uu ula wareego booskan. Dhammaan dadka daneynaya shaqadan waxaa si weyn loogu boorrinayaa in ay codsiyadooda ku soo gudbiyaan ka hor inta aan la gaarin taarikhda kama dambeysta ah ee xayeysiinta ku xusan.
Dadka daneynaya in ay codsadaan shaqadan kuwaas oo la shaqeeyo qandaraasleyda UN waa in ay fuliyaan waajibyada heshiiska ay la galeen qandaraasleyda UN si ay u noqdaan dad u qalma in ay codsadaan booskan bannaan.
Booskan waa boos ka bannaan Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), Beledweyne. Xil-hayaha waxaa uu hoos imaan doona Madaxa Xafiiska.
Kaaliyaha Luuqadda ee Goobta waxaa uu mas’uul ka noqon doona waajibaadyada soo socda:
In uu turjumaad af ah oo waadax ah isla markana kooban uu u fidiyo mas’uuliyiinta hay’adda iyo bulshada maxalliga ah, iyada oo taasi lagu taageerayo hawlgallada iyo hawlaha guud ee hay’adda.
In uu dukumiintiyo iyo xiriir heer sare ah oo ku saabsan mowduucyo kala duwan ee la xiriira arrimaha ay ku lug leedahay Qaramada Midoobay u kala fasiro luuqadaha Af-Soomaaliga iyo Ingiriiska.
In uu kala kaashado dhiggiisa ka tirsan waaxyada kale arrimaha la xiriira diyaarinta jadwalka iyo qorshayaasha maamul. .
In uu si dhow ula socdo wararka ka baxaya Warbaahinta uuna ogeysiiyo Kormeerayaasha iyo asxaabta kale macluumaadka muhiimka ah ee habboon.
In uu waraaqo u diyaariyo Kormeeraha.
In uu mas’uuliyiinta ka caawiyo diyaarinta qabyo qoraallo, qoraallo kooban iyo macluumaad kooban iyo macluumaad ku saabsan dalka.
In uu fayl gareeyo, uuna soo saaro dukumiintiyada xafiiska.
In uu qabto waajibaadyada kale, oo ay ka mid yihiin wadista baabuurta xafiiska, markii loo baahdo.
Xilkasnimo: In uu ku faano shaqadiisa iyo guulaha; in uu muujiyo xilkasnimo iyo in uu aqoon buuxda u leeyahay shaqada; In uu yahay qof feejigan oo ku wanaagsan ka soo bixidda ballanqaadyada, in uu dhowro muddada kama dambeysta ah uuna ku guuleysto natiijooyinka; halkii uu dhiiriggelin ka heli lahaa arrimo shaksiyeed oo asaga u khaas ah in uu dhiiriggelin ka helo arrimo ku saabsan shaqo; in uu dhabar-adeyg muujiyo markii uu la kulmo dhibaatooyin ama caqabado; In uu noqdo qof deggan markii ay asiibto xaalado walaac ku abuura.
Waxbarasho: Shahaaddada dugsiga sare ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in uu qofka awoodo in uu shaqeeyo kaddib wakhtiga shaqada, fasaxa dhammaadka toddobaadka iyo kaddib qofka tookadiisa shaqo. In uu awoodo in uu u safro goobaha ay hay’addu hawlaha ka waddo, iyo in marba meel la geeyo.
Khibrad: Ugu yaraan afar (04) oo uu qofka khibrad shaqo ka haysta bixinta adeegyada turjumidda/fasirka.
Luuqad: Ingiriis iyo Faransiis ayaa ah luuqadaha shaqada ee Qarammada Midoobay. Booskan waxaa loo baahan yahay qof fasIIx ku ah luuqadaha Ingiriiska iyo Af-Soomaaliga. Aqoonta luuqadaha kale ee Qaramada Midoobay waa mid wax tar leh.
Habka Qiimeynta: Qiimaynta dadka u qalma boosaskan ayaa waxaa ka mid noqon karaa layli qiimeyn ah kaas oo ay daba socon doonto warreysi ku saabsan kartida.
Dadka u qalma shaqadan waxaa ay ku soo gudbin karaan codsiyadooda oo ay qayb ka tahay foomka Taariikhda Shakhsiyeed ee Qaramada Midoobay (P.11) cinwaanka hoose markii la joogo taariikhda kama dambeysta ah ama ka hor. Foomka P11 waxaad ka heli kartaa https://unsos.unmissions.org/jobs. Codsiyada la soo gudbiyo kaddib wakhtiga kama dambeysta ah ee 24, Luulyo 2018-ka lama aqbali doono. Warqadaha taarikh nololeedka dadka (CV) lama aqbali doono.
Lambarka Ogeysiiska Shaqada Bannaan iyo Magaa Jegada ka dhig cinwaanka email-ka.
Fadlan ku lifaaq nuqulka foomka P11, Shahaaddada, Baasaboor iyo/ama Teesaraha Aqoonsiga. Kuwani waa loo baahan yahay, waxaa ay qayb ka yihiin codsigaaga waxaana loogu talagalay in lagu qiimeeyo in aad shaqada u qalantid. Fadlan la soco in Shahaadooyinka Waaxda Dembi Baarista (CID-da) iyo Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda (NISA) loo baahan doono qaybaha dambe ee hannaanka shaqaaleynta.
Previous articleAMISOM oo in ka badan 40 xildhibaanno oo ka tirsan Maamulka K/Galbeed tababar ugu qaaday Kenya [Sawirro]
Next articleUNSOM Waxay soo bandhigeysaa shaqo ka bannaan: Kaaliyaha Sarkaalka Asluubta